Gypsy Vanner, oo caan ku ah "faraska guska" | Fardaha Noti
Asalka Gypsy Vanner, caan ahaan loo yaqaan «fardaha jimicsiga», waxay dib u bilaabatay qeybtii labaad ee qarnigii XNUMX-aad. Qoysaska Ingriiska iyo Irishka ee isir jinsiyeedka waxay bilaabeen inay badalaan baqlo ay u isticmaali jireen qaab dhaqameed, fardaha. Fardo xoog leh oo awood u leh inay jiidaan gaariyo culus oo sidoo kale ku mahadsan awgood awgood ayaa lagu fuuli karaa gadaal waxayna ku fiicnaayeen inay la joogaan qoyska oo dhan.
Waxay yihiin si sax ah astaamaha sida awoodiisa toogashada ama dabeecaddiisa dabacsan, maxaa waxay ka dhigtay Gypsy Vanners inay ku faafaan adduunka oo dhan.
Aynu wax yar ka sii baranno iyaga!
Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, noocani wuxuu bilaabay ballaadhintiisa Waxaan dareemayaa in loo isticmaalay beeraha, inta badan faras qabyo ah, laakiin sidoo kale howlaha kale ee fardooleyda oo la siiyay kala duwanaanshaheeda.
In kasta oo ay heshay magacyo kala duwan intii ay jirtay, kan soo hadhay iyo kan maanta lagu yaqaanba waa midka tilmaamaya asalkiisa: Gypsy Vanner ama Gypsy Horse.
Waa a Nooc aad u qurux badan oo la fiiriyo midabkiisa iyo muggiisa mugga leh ee man iyo dabo. In kasta oo ay noqon karaan kuwo isku mid ah, haddana si adag ayaa loo dhisay, oo leh lafo xoog leh, qoobabyo waaweyn iyo kalagoysyo, iyo dabeecad deggan. Aynu si dhow u eegno qaab-dhismeedkeeda.
Jir-dhiska iyo murqaha fardahan ayaa ka dhigaya kuwo awood u leh inay jiidaan gaariyo culus oo aan daalin. Waxay leeyihiin dherer udhaxeeya 145 cm ilaa 155 marka ay engegaan (in kastoo ay gaari karaan ilaa 168 cm) iyo culeys gaaraya 635 kg, taas oo kuxiran cunnadooda iyo howlahooda. Waa fardo is haysta oo leh laab ballaadhan iyo gadaal gaaban. Leh wax ku saabsan gadaal wareegsan iyo meesha a isku laab maqaarka nooca caadiga ah iyo in iyaga lagu magacaabo Badhanka Apple. Iyagu waa isku mid isku mid ah, oo aan aad u weyneyn ama u ballaaran.
ka Koofiyadaha Gypsy Vanner ayaa u muuqda inay weyn yihiin, wax iyaga ka dhigaya inay hantiyaan a dusha sare ee taageerada. Qoorta ayaa xoog leh, oo leh madax fiican.
Laakiin aan ka hadalno laba ka mid ah astaamaha aasaasiga ah ee tarankaas: jaakaddiisa iyo dabeecaddiisa.
Jaleecada hore, shaki la'aan waxa aadka u taagan oo soo jiita dareenka waa dhogorta. Timaheeda xariirta ah ee toosan waa waxa keenay in taranka loo tixgeliyo mid ka mid ah ugu qurux badan adduunka. Ku anqawyada waa la qurxiyey oo si buuxda ayaa loo duubay timo (waxaa loogu yeeraa baalal lugaha) oo aad u dheer oo xayawaanka u oggolaanaya inuu diirimaad ku yeesho xagjirnimada. Tani runti waxtar ayey u ahayd qeybaha Scotland, Ireland iyo England halka ay asal ahaan ka soo jeedo halka jiilaalku qabow yahay. Ku man iyo dabada waa dheeryihiin, kan dambe ee taabanaya dhulka, oo leh dheecaan dhaca.
La lakabka ugu badan ee noocani waa pint ama pia, midabyo madow iyo caddaan ah. Xataa haddii yeelan karaan noocyo kala duwan oo kala duwan sida roanada ama geedaha laabta, inkasta oo had iyo jeer la isku daro dhogorta.
Dabeecaddiisu waa mid aad u deggan waxa uu yahay ku habboon in lagu raaco dhammaan noocyada fardooleyda aan khibradda lahayn, gaar ahaan carruurta. Waxay kala yihiin aad u bulshey noqoshada marka loo eego eeyaha. Dhammaan astaamaha dabeecaddiisa oo ay weheliso dabacsanaanta iyo kala-duwanaanta hawlaha ama hawlaha ay qaban karto, ayaa ah waxa ka dhigay in noocani leeyahay guul weyn oo adduunka ah.
Waa in lagu daraa, waliba astaamo ahaan, inay soo bandhigeen khuburo, inay yihiin mid ka mid ah sinnaanta muujinta caqliga weyn. Tani waa mid ka mid ah sababaha a xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya xayawaanka iyo milkiilaha, in jinsiyadaha kale aysan macquul aheyn in lagu gaaro. Waxaa sidoo kale loogu yeeraa faraska carruurta iyagoo aad u jilicsan oo sharaf leh.
Qiyaastii 1850 Qoysaska Roma ee ku nool UK iyo Ireland waxay bilaabeen inay adeegsadaan fardaha iyagoo beddelaya baqalkii ay u isticmaali jireen inay ku jiitaan gawaaridooda. In ka badan boqol sano, jimicsiyada jiqda ayaa naftooda u hibeeyay Taranka xulashada muunadaha si loo abuuro faras faras ah oo buuxiya baahiyahaaga iyo baahiyahaaga. Ayaa ahaa sanadkii Sannadkii 1996-kii markii loo yaqaanay «fardaha jimicsiga» ayaa sameeyay nooc rasmi ah loo yaqaan 'Gypsy Vanner'.
Ujeeddadu waxay ahayd in la abuuro faras u gaar ah. Xayawaan gaadhi kara gaadhifaraskiisa culus maalintii oo dhan wax cunaya oo cabbaya qaddar yar. Isla mar ahaantaana, waxay doonayeen inuu noqdo ku filan inay qabtaan xubnaha da'da yar ee qoyska. Iyo, haddii taasi aysan ku filnayn, in aan haysto cunsur qurux badan, oo leh madax la safeeyey iyo jaakad aan kaa dhaafi doonin danayn. Farasku wuxuu u ahaa jimicsiyadaan astaan ​​u ah meeqaam wanaagsan oo bulshada dhexdeeda ah, sidaa darteed waxay dhiirrigelin fara badan abuureen abuurka.
Faahfaahinta xiisaha leh ee tarankaani waa in markii jimicsiga loo diro si loo jiido gawaarida, farasku ma istaagin illaa uu ka gaaro halka loo socdo. Waxay safri karaan tiro badan oo kiiloomitir ah. Waxay ahayd faras loo abuuray qabyo, inkasta oo maanta loo habeeyey koorsada, noqotay faras aad u raaxo leh
Natiijada, shaki la’aan, waxay noqotay guul. Hadda, sidee ku heleen? Baadhitaanno kala duwan oo ku saabsan asalka jinsiga ayaa muujiyay inay heleen saamaynta faraska Shire iyo Clydesdales. Si kastaba ha noqotee, shaki ayaa weli jira, maaddaama gypsiyada ay qarsoodi u yihiin muunadaha ay u isticmaaleen taranka iyo faahfaahinta taranka ay rabeen inay gaaraan.
Sannadkii 1996-kii waxaa la aasaasay Bulshada Faraska Gypsy Vanner, oo ay weheliso buugga ugu horreeya ee cawsduur.
Hadda, taranka ayaa aad iyo aad u faafa oo aad iyo aad iyo aad ayaa looga mahadceliyaa. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa bandhig sababtoo ah bilicsanaanta quruxda badan ee aan kahadalnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Gypsy vanner, the «fardaha jimicsiga»